Eo ny Marketer anao hanampy anao | Martech Zone
Eo ny Marketer anao hanampy anao
Alahady, Jolay 26, 2015 Alahady, Jolay 26, 2015 Douglas Karr
Manana namana be dia be izay mitantana masoivohon'ny varotra aho ary manam-pahaizana momba ny marketing be dia be manerana ny Internet izay sakaizako. Tsy mihoa-pefy aho rehefa miteny fa ny zavatra mahakivy indrindra hitako sy ny hafa momba ny asanay dia ny fanoherana amin'ireo orinasa iarahanay miasa.
Manakarama anay ny manatona mpanjifa ary manampy amin'ny paikadin'ny varotra ataon'izy ireo satria fantatr'izy ireo fa natolotry ny mpifaninana aminy ny vodin'izy ireo. Fantatr'izy ireo tanteraka fa tsy mandeha ny zavatra ataony. Nefa, rehefa mandinika ny paikadin'izy ireo isika, manao fikarohana amin'ireo mpifaninana aminy ary miverina miaraka amina drafitra… toherin'izy ireo:
Tsy manam-potoana isika. - Marina ve? Raha tsy manam-potoana hitahirizana sy hampivoarana ny orinasanao ianao dia mifalia amin'ny fihenan'ny vola miditra azonao. Tsara vintana!
Nanao izany izahay indray mandeha ary tsy nandeha izany. - Indray mandeha. Tsy misy tetika maharitra, tsy misy fanao tsara indrindra, tsy misy fahaizana… tsy mandeha izany satria tsy fantatrao izay nataonao.
Namaky lahatsoratra an-tserasera aho izay nilaza fa tsy mandeha izany. - Ho an'ny lahatsoratra rehetra an-tserasera dia misy lahatsoratra mitovy sy mifanohitra amin'ny Internet. Heveriko fa izany no lalàna fahatelo fahatelo an'ny Internet an'ny Newton. Atsaharo ny fikarohana lahatsoratra mifanaraka amin'ny toeranao.
Tsy zakantsika izany. - Tena # 2? Tsy afaka mitazona sy mampiroborobo ny orinasanao ianao? Fa maninona no niantso ahy ianao?
Ny zanak'olo-mpianadahy amiko, izay nanao ny tranokalan'ny Fiangonako, dia nilaza fa… - Eny, mazava ho azy. Sendra olana… Tsy mbola nahare momba an'io Fiangonana io aho taloha.
Tsy manam-paharoa ny orinasantsika, hafa ny mpanjifanay. - ny mety ho mpanjifa… fa satria maimbo ny varotrao ary tsy mahazo ny ankamaroan'ny mpanjifa toa ny mpifaninana aminao ianao.
Ny fandikana ireo valinteny rehetra ireo dia:
Tsy matoky anao izahay.
Niantso anay anefa ianao ary nangataka fanampiana anay. Ary nohamarininao ny loharanon-kevitray. Ary hitanao ny fiderana indostrialy azonay. Ary - raha tsy mahomby izahay, dia samy handroaka anay ianao ary hilaza amin'ny olona rehetra fa fantatrao izany asa ratsy nataonay izany. Tena mieritreritra ny hahatanteraka izany ve ianao?
Ny tanjonay amin'ny maha consultant marketing anay dia ny hanome ny traikefanay, ny fahaizantsika ary ny fitiavantsika, hanampy ny orinasanao hanao tsara kokoa. Azontsika atao ve ny manakana ny lamosina sy ny fiasana ary handeha hiasa? Mandreraka.
Matetika aho te hahafantatra raha sendra lozam-pifamoivoizana ny iray tamin'ireto olona ireto, raha nilaza tamin'ny mpamono afo ny fomba hahafahany mivoaka ny fiara amin'ny fomba tsara indrindra izy ireo, ny fomba tokony hitondran'ny EMT azy ireo, ary avy eo ny fomba tokony hahasitranan'ny Dokotera. izy ireo.
Mandra-pahoviana, ohatrinona, ohatrinona, hanao ahoana… ny dingana manaraka amin'ny famotorana atao fanazavana, mazava tsara, ny tena paikady sy ny valiny. Toy ny manontany mpamily fiara mihazakazaka sy ny ekipany ny fanitsiana sy ny paikady hapetrany alohan'ny hazakazaka. Aza jerena ny toetr'andro, ny mpamily hafa, ny fahaizan'ny fiara… lazao fotsiny anay ny momba ny 4 ora manaraka sy izay rehetra hitranga isaky ny am-pofoany.
Raha manana mpanolo-tsaina amin'ny varotra milaza aminao ianao dia mety horoahinao izy ireo noho ny fanantenana tsy ampoizina sy mandainga aminao. Raha manana consultant ara-barotra marina ianao, dia holazain'izy ireo aminao fa mila fotoana ny fikarohana, ny fitsapana ary ny fanitsiana ny programa ataonao mba hahatratrarany ny faran'izay mety ho vitany.
Na Aza Mihaino…
Izahay dia nanana mpanjifa izay notompoinay nandritra ny taona maro. Isaky ny manafaingana ny paikadin'izy ireo izahay ary mieritreritra izy ireo fa vita… miakatra ny tranonkala, miakatra ny làlana, voasoratra anaty anaty, boom. Hajanon'izy ireo ny fifamofoantsika. Nampitandrina azy ireo izahay fa mila mitazona ny paikady hatrany izy ireo, saingy mijanona izy ireo ary hirodana ny tetika. Avy eo dia hiverina aty aminay izy ireo, manomboka indray, manohitra izay rehetra nataonay, ary mitaraina momba ny valiny. Ny valiny dia hanomboka foana ratsy satria tsy maintsy nirehitra indray ny fiakarana sy ny fahalianana amin'ny marika misy azy ireo indray.
Iray volana lasa izay, nanapa-kevitra ny hisaraka izahay. Mbola afaka miditra amin'ny azy ireo isika Analytics ary ny fitsidihan'izy ireo ara-organika dia midina -29.26%.
Ny tiako indrindra. Herinandro vitsivitsy ary ity no hafatra henontsika tsy tapaka miaraka amin'ireo mpanjifa izay manohitra. Izy ireo dia nanohitra ny tetika rehetra tamin'ny fotoana rehetra, noho izany mazava ho azy fa mitarika ireo. Manamarina izay rehetra nolazain'izy ireo nandritra ny fotoana rehetra… izay notorinay tsy mandeha, hoy ny sasany, ary hafa ny mpanjifany.
Sa izy ireo?
Miady hevitra aho fa ny antony manosika sy ny fanatanterahana ny varotra sy ny varotra dia tsy mitovy mihitsy. Ny varotra dia voatosika hikatona, ny marketing dia voatosika hitarika volon-dàlana mitarika tsara kokoa amin'ny orinasanao. Vao haingana izahay no nanoratra momba ny fahasosoran'ny orinasa tarihin'ny varotra amin'ny marketing hiresaka mivantana amin'io olana io.
Ity misy ohatra iray mivantana avy amin'ny orinasako. Nandany teti-bola lehibe tsy mahazatra izahay tamin'ny fanatrehana sy fanohanana hetsika isan-taona taona vitsy lasa izay. Izany dia mihoatra ny antsasaky ny teti-bola mahazatra fanaonay isan-taona. Ny orinasanay dia nanidy kaonty kely tsy nisy olana, saingy tsy tonga tany amin'ireo kaonty manan-danja izay vatofantsiky ny mpanjifanay izahay. Azoko natao ny nanohy nanidy orinasa kely ary nanao tsara… na afaka niasa aho mba hikolokolo torolàlana vitsivitsy izay hanatrika io hetsika io.
Nanatrika ny hetsika izahay ary nandany herintaona mahery nikolokoloana mpitarika roa izay nihaoninay tao. Naharitra herintaona mahery, saingy nanidy ny roa amin'ireo orinasa roa izahay ho an'ny fifanarahana roa lehibe indrindra tamin'ny tantaran'ny orinasanay. Raha nitsara fotsiny ny ezaka ara-barotra nataontsika isika iray volana na taty aoriana, dia ho nieritreritra isika fa tsy fahombiazana tanteraka.
Amin'ny fandefasana harato lehibe kokoa amin'ny marketing an-tserasera dia hahazo fitarihana bebe kokoa ianao. Ary maro… na ny ankamaroany… aza dia mety hitsentsitra. Fa hahazo miditra amin'ny trozona ihany koa ianao izay tsy ho nanararaotra nisintona anao mihitsy. Ny trozona dia mitaky fotoana bebe kokoa ho anao hananganana fahefana an-tserasera, manangana fifampitokisana amin'ny fifaneraserana lehibe kokoa, mikolokolo ireo mpikomy ireo, ary manidy varotra bebe kokoa.
Farany, hitombo ny salanisa fidiram-bolanao isaky ny mitarika, hihena ny vola vidinao isaky ny mitarika anao ary hiteraka fitarika mahay ianao.
Mila fotoana fotsiny izany. Mialà sasatra ary avelao izahay hanampy anao.
Tags: mitarika minonofialantsiny amin'ny marketingfanoherana marketing
Mandehana goavambe miaraka amina paikadin'ny mailaka voahitsaka handroahana ROI Sky-High